Fanakianana maivana | Martech Zone
Alahady 18 Febroary 2007 Douglas Karr
Ny fahatsapana indraindray no zava-misy.
Febroary 18, 2007 amin'ny 1:59 PM
Misaotra. Tiako ny tsikera mihetsiketsika, izay tsy manimba zavatra.
Febroary 18, 2007 amin'ny 2:02 PM
Tena hevitra tsara izany ry Martin! Tsy nojereko izany fa manaiky tanteraka aho.